खेलकुद – " कञ्चनजंगा News "
विमल घर्तीमगर जस्लाई जीवनकै ठूलो चोट
No Comments on विमल घर्तीमगर जस्लाई जीवनकै ठूलो चोट
रमेश सुवेदी / काठमाडौं :पहिलो अफ्रिकन प्रतिद्वन्द्वी मौरिसससँगको खेल फरवार्ड विमल घर्तीमगरका लागि निकैनै स्मरणीय रहनेछ । उनले केही वर्ष अघिसम्म आफू खेलमा फर्कने या नर्फकने सोच्न सकेका थिएनन्, अन्योल थियो । ठमेलको ठिस्को काण्डमा मुछिएका विमल कारबाहीपछि मैदान त फर्किए । तर, जीवनकै ठूलो चो’ट बोके ।
२०७७ साल मंसिरमा राष्ट्रिय टोलीको अभ्यास सत्र क्रममा घुँडाको चो’टपछि एमआरआई रिपोर्टमा एन्टेरियल क्रुसिएर लिगामेन्ट (एसीएल) र मिडियल कोल्याटेर लिगामेन्ट (एमसीएल) गएपछि विमल करिब एक वर्ष नै मैदान बाहिर रहे । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को सहयोगमा विमलले विश्वप्रसिद्ध कतारको अस्पेटार अस्पतालमा पुस २०७७ मा उपचार पाए ।
रिकवरीपछि विमल असाेज २०७८ मा यु-२३ राष्ट्रिय टोलीसँगै अभ्यासमा फर्किए । लगत्तै सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्न साविक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग जोडिए । सुरुवाती खेलमा जम्न समय खर्चिएका विमलले पछिल्ला खेलहरूमा आफूलाई प्रमाणित गरे । जारी लिगमा ८ खेल खेल्दा ४४५ मिनेट (इन्जुरी समय बाहेक) मैदानमा बिताएर तीन गोल गरे ।
जुन गोल विमलले भदाै २०७५ मा ढाकामा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा आयोजक बंगलादेशविरुद्ध गरेपछिको थियो । दोस्रो खेलमा भने विमलले ४६ मिनेटपछि मैदानमा प्रवेश पाए । गोल भने भएन । तर, उनले अग्रपंक्तिमा आफूलाई प्रमाणित गर्दै विपक्षी रक्षकलाई दबाबमै राखे । लेफ्ट ब्याक पोसिजनमा खेलिरहेका सुजल श्रेष्ठले १०औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक हुँदा नेपाल १-० ले विजयी भयो । पहिलो अफ्रिकन प्रतिद्वन्दी मौरिसससँग नेपालले दुबै मैत्रीपूर्ण खेलमा आफ्नो कब्जा जमायो ।
यसअघि लिगका दौरान बोल्दै विमलले आफू सोहि ब्यक्ति भएपनि आफ्नो बानी व्यहाेरा र आचरण सुध्रिएको बताएका थिए । जुन उनले मैदानमा समेत देखाएका छन् ।
पूर्वकप्तान हरि खड्काविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा, यस्तो छ अभियोग
No Comments on पूर्वकप्तान हरि खड्काविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा, यस्तो छ अभियोग
राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा पुरुष खेलाडी खेलेको भन्दै लिंग जाँचको माग (५ तस्विर सहित)
No Comments on राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा पुरुष खेलाडी खेलेको भन्दै लिंग जाँचको माग (५ तस्विर सहित)
एजेन्सी । इरानको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा पुरूष खेलाडी खेलाइएको भन्दै जोर्डनले लिंग जाँचको माग गरेको छ । इरानको राष्ट्रिय फुटबल टिमकी गोलकिपर जोहरेह कोउडेइ पुरुष भएको भन्दै जोर्डनले एसियाली फुटबल महासंघ )एएफसी) सँग लिंग जाँचको माग गरेको हो ।
उज्वेकिस्तानमा सेप्टेम्बर २५ मा भएको खेलमा इरानले जोर्डनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो । इरानकी गोलकिपर जोहरेह कोउडेइले जोर्डनका २ पेनाल्टी बचाएकी थिइन् ।जोर्डनले गोल किपरको लिंग जाँचको माग गरेपछि एसियाली फुटबल महासंघले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । इरानी टिम म्यानेजरले भने आरोपको खण्डन गर्दै जोर्डनले खेल हारेपछि बिभिन्न बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएको छ ।
जोर्डन फुटबल संघका अध्यक्ष प्रिन्स अली बिन अल हुसैनले इरानले महिला टिममा पुरूष गोलकिपर खेलाएको भन्दै एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) सँग उनको लैंगिक अवस्था पुष्टि गर्न माग गरेका हुन्।जोर्डनले यस्तो माग गरेपछि एसियाली फुटबल महासंघका एक प्रवक्ताले यस विषयमा जाँच चलिरहेको बताएका छन्। फिफाका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रिन्स अलीले यदि जोर्डनको आरोप सत्य भए निकै गम्भीर मुद्दा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसअघि पनि २००८ र २०१० मा जोहरेहले एसिया कप छनोटमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै उनले हरेक पटक मेडिकल जाँच हुने र एसियाली फुटबल महासंघलाई सबै दस्तावेज उपलब्ध गराइएको दाबी गरे।
No Comments on जितपछि अस्ट्रेलियाका खेलाडीको ‘अनौठो’ उत्सव, जुत्तामा हा’लेर बि’यर पि’ए (भिडियो सहित)
काठमाडौं : अष्ट्रेलियाले टी-२० विश्वकप २०२१ को उपाधि जितेको छ। एकदिवसीय विश्वकपको पाँच पटकको च्याम्पियन अस्ट्रेलियाको यो पहिलो टी-२० विश्वकप हो। आइतबार दुबईमा भएको फाइनलमा आरोन फिन्चको नेतृत्वमा रहेको टोलीले न्युजिल्यान्डलाई आठ विकेटले पराजित गरेको थियो। जितपछि अस्ट्रेलियाले खुसीयाली मनायो। टोलीको उत्सव हवाइजहाजमा पनि जारी थियो।
अस्ट्रेलियाली टिमको सेलिब्रेसनका तस्बिर र भिडियो भाइरल भइरहेका छन्। स्टिभ स्मिथले पनि एडम जाम्पाको प्रशंसा गर्दै सेल्फी पोस्ट गरेका छन्। अस्ट्रेलियाका खेलाडी म्याथ्यू वेड र मार्कस स्टोइनिसले जितपछि मनाइरहेको सेलिब्रेसन अनौठाे छ। यी जब वेडले आफ्नो जुत्तामा र’क्सी पि’ए, स्टोइनिसले उनको पछाडि उस्तै विजयको उत्सव मनाइरहेको देखियो।
जुत्तामा म’दि’रा पिउनुको कारण ?
जुत्तामा म’दि’रा पिउनुलाई अष्ट्रेलियामा ऐतिहासिक रूपमा राम्रो भाग्य ल्याउने वा या’त’ना वा पार्टीको रूपमा लिइन्छ। महिलाको चप्पलले स्याम्पेन र बि’यर पि’उ’नु प’तनको कारण मानिन्छ। यो अभ्यास अष्ट्रेलियामा अझै पनि लोकप्रिय छ।
No Comments on पोर्चुगललाई स्तब्ध बनाउँदै सर्बिया फिफा विश्वकपमा छनोट, अब कतारमा हुने बिश्वकपमा रोनाल्डो नआउने पक्का
एजेन्सी – सुरुवाती एक गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा पोर्चुगल अर्को वर्ष कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप कतार २०२२ को लागि सोझै छनोट हुन असफल भएको छ । घरेलु मैदानमा एक गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा सर्वियासँग २-१ ले स्तब्ध हुदै पोर्चुगल विश्वकपमा सोझै छनोट हुन असफल भएको हो । यो जितले सर्वियाले पोर्चुगललाई पछि पार्दै समूह ‘ए’ बाट विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको छ ।
यही समूहको अर्को खेलमा आयरल्यान्डले लक्जेमवर्गलाई ३-० ले पराजित गरेको ट । आयरल्यान्डको जितमा सेन डुफी, चिडोजी ओग्वेने र कलुम रोविन्सनले गोल गरे । सबै तीन गोल दोस्रो हाफमा भएको थियो ।
No Comments on ‘पाकिस्तानका हिरो’ शाहीन आफ्रिदी को हुन् ? जसलाई शाहीद आफ्रिदीले छोरी दिँदैछन्
काठमाडौं। सन् २०२१ को टी-२० विश्वकप यूएइ र ओमानमा जारी छ। विश्वका चर्चित क्रिकेटर सहभागी छन्। हरेक क्रिकेटरको नाम चर्चामा आइरहेको छ। त्यसैमध्ये चर्चामा आइरहेको एक नाम हो, शाहीन शाह अफ्रिदी।अफ्रिदी अहिले चर्चाको शिखरमा छन्। चर्चा नहोस् पनि कसरी टी-२० विश्वकपमा पहिलोपटक पाकिस्तानले भारतलाई हरायो। र, भारतमाथि रवाफिलो जित निकाल्न तिनै अफ्रिदीले महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
रोहित शर्मालाई शून्य र केएल राहुललाई प्याभिलियन पठाएपछि उनले कप्तान विराट कोहलीको समेत विकेट लिए। शाहीनले चार ओभरमा ३१ रन दिए। भारतीय ब्याटिङले अन्तिमसम्म रिकभर गर्ने मौका पाएन र शाहीनको अगाडि १५२ रन मात्रै बनाउन सके।त्यस्तै न्युजिल्यान्डसँगको दोस्रो खेलमा पनि उनले चार ओभर बलिङ गर्दै एक मेडनसहित २१ रन खर्चिएर एक विकेट हात पारे।
No Comments on छोराको कप्तानीमा पाकिस्तानले भारतलाई ह’रा’एपछि आजामका बुवाले थाम्न सकेनन् आँ’शु (भिडिओ)
क्रिकेटका प्रशंसकहरूलाई अहिले आइसिसी टी-२० पुरुष विश्वकपको ज्व’रोले छोएको छ । युएईमा भइरहेको विश्वकपमा विभिन्न १६ मुलुक सम्मिलित छन् ।तीमध्ये आइतबार भएको भारत र पाकिस्तानबीचको खेलको चर्चा अझै सकिएको छैन । आइतबारको खेलमा पाकिस्तानले पहिलो पटक विश्वकपमा ह’रायो त्यो पनि दस विकेटले ।
एक दिवसीय र टी-२० विश्वकपमा अहिलेसम्म १२ पटक आमनेसामने हुँदा पाकिस्तानले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको थिएनन् । राजनीतिक रूपमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका यी दुई मुलुकको क्रिकेटमा बितेका २९ वर्षसम्म पाकिस्तानमाथि भारत हा’बी थियो ।
आइतबारको खेलपछि भारत हावी हुने शिलशिला टुटेको छ, पाकिस्तानी फ्यानमा नयाँ उमंग सञ्चार भएको छ । जितसँगै विभिन्न रेकर्ड बनेका छन् ।भारतलाई टी-२० फर्म्याटमा प्रतिष्पर्धी टिमले यसअघि कहिल्यै पनि १० विकेटले हराउन सकेका थिएनन् । पाकिस्तानले पनि यसअघि कुनै टिमलाई १० विकेटले जितेको थिएन ।
भारतमाथि यो सानदार जितको नेतृत्व गरेका थिए, २७ वर्षीय बाबर आजामले । तीन वर्षअघि पाकिस्तान टिमको नेतृत्व सम्हालेका आजामले भारतविरू’द्धको टिमलाई नेतृत्वमात्रै दिएनन् व्यक्तिगत योगदान पनि गरे ।ओपनिङमा ब्याटिङ गर्न उनले नटआउट रहेर ५२ बल ६८ रन हाने । उनलाई अर्का ओपनर मोहम्मद रिजवान साथ दिए। रिजवानले पनि नटआउट ५५ बलमा ७९ रन हिर्काए ।
निर्धारित २० ओभर सकिनुअघि नै भारतले दिएको १५१ रन लक्ष्य पूरा भएपछि पाकिस्तानभित्र र बाहिर रहेका पाकिस्तानले जितको ‘जश्न’ मनाए ।
दुबई इन्टरनेशनल रंगशालाको प्यारापिटमा बसेर छोराको खेल हेरिरहेका आजामका बुवा आजाम सिद्धिकीले हर्षको आँ’शु रोक्न सकेनन् । उनी खुसीले भक्कानिए। वरिपरि बसेकाले अँगालो हालेर उनलाई बधाई दिए ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा सिद्धिकीको उक्त भिडिओ भाइरल भइरहेको छ । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तको लाहोरमा बस्ने सिद्धिकीलाई आफ्ना छोराको क्षमतामा विश्वास थियो। छोराले पाकिस्तान टिममा डेब्यु गर्नुअघि नै उनले छोरो एक दिन मैदानमा छाउने बताएका थिए ।
क्रिकेटको तथ्यांक राख्ने मजहर आर्सदले ट्वीटरमा सिद्धिकीको भिडिओ राख्दै भनेका छन्- त्यो आजाम पाकिस्तानी टिममा डेब्यु हुनुभन्दा तीन वर्षअघिको कुरा हो। त्यतिबेला उनले मलाई भनेको म सम्झन्छु- बस डेब्यु हो जाने दो। आगे सारा मैदान बाबरका है । (डेब्युमात्र हुन दिनुस्, त्यसपछि सबै मैदान बाबरकै हुन्छ ।)
No Comments on एन्फाले बोलाए नेपाल नै फर्किन्छु: अलमुताइरी
No Comments on ‘अब नेपालको भूमी कहिल्यै टेक्दिन’ भनेका प्रमुख प्रशिक्षक अलमुताइरीले फेरे बोली, नेपाली खेलाडीमा उत्साह
काठमाडौं । माल्दिभ्समा आयोजना भएको १३औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार नेपाल आइपुगेको छ । तर, नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी नेपाल आएनन् । कुवेतका फुटबल म्यानेजर अलमुताइरी माल्दिभ्सबाटै कुवेत गएका छन् । त्यहाँ उनी परिवारसँग केही समय बिताएर नेपाल फर्किने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) स्रोतले जनाएको छ ।
साफ च्याम्पियनसिपपछि मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिने र नेपाल कहिल्यै नफर्किने घोषणा गरेका उनी नेपाल आएर नेपाली टोली सम्हाल्न राजी भएको एन्फा स्रोतले जनाएको छ । अलमुताइरी सन् २०२२ को फिफा विश्वकप छनोट र सन् २०२३ को एसिया कपअन्तर्गत दोस्रो चरणको छनोटका लागि नेपाली टोली सम्हाल्न नेपाल आएका थिए । प्रो(लाइसेन्स प्राप्त अलमुताइरी २०७७ चैतमा नेपालको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए । नेपालले पहिलो पटक साफ च्याम्पियनमा फाइनल खेलेर इतिहास रचेको हो ।
माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा शनिबार राति भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३–० ले पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो । फाइनलमा पराजित भएपछि नेपाल ऐतिहासिक उपाधि जित्नबाट विमुख भएको थियो । तर, पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता बनेर नेपालले इतिहास भने रच्न सफल भयो ।
पाँच राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल लिग चरणमा उपविजेता बन्दै फाइनल पुगेको थियो । लिग चरणमा नेपालले माल्दिभ्स र श्रीलंकालाई हराएको थियो । यस्तै भारतसँग पराजित भएको नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो ।
No Comments on भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पक्राउ